विराटनगरमा मध्यरातमा महिलाको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी युवाले के गरे यस्तो? |
August 4, 2021 August 4, 2021 adminLeaveaComment on विराटनगरमा मध्यरातमा महिलाको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी युवाले के गरे यस्तो?
एक्लै महिला भएको घरमा राति जाने एक पुरुष प’क्राउ गरेका छन् । उनी म’हिलाको घरमा झ्यालबाट पसेका थिए । त्यहाँ उनले महिलामाथि नरा’म्रो नियत राखेर गएको बताइन्छ । तर उनलाई प्रहरीले प’क्राउ गर्न सफल भएको छ । यो घ’टना बिराटनगरको हो ।मध्यरातमा महिलाको घरमा गएर महिलामाथि त्यस्तो गरेको आ’रोपमा विराटनगरबाट ती युवा प’क्राउ परेका हुुन् । प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–६ का २८ वर्षीय गणेश महतोलाई प’क्राउ गरेको हो । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार महतोले मध्य राति अर्काको घरमा पसेर महिलामाथि त्यस्तो गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । **याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला*
यो पनि:५ बर्षकी छोरीकी आमा भै सकेकी एकजना सफा च’रित्रकी साथीले पहिलो पल्ट मलाई सुनाई के गर्नु यार सुष्मा बुढो आफूलाई पुगेपछि उता पट्टी फर्कीएर मज्जाले सुत्छ, आफूलाई नि’न्द्रै लाग्दैन । केही महिना पछि उसलाई फोन गर्दा उसले अर्को स’मस्या सुनाई खोई के भको हो यसलाई केटीसंग पल्केर हो की के हो मेरो र छोरीको त वास्ता ब्यास्ता गर्दैन फेसबुकमा मात्रै झुण्डि रहन्छ । मैले श्रीमान श्रीमतीबिचको सामान्य कुरा सम्झेर उसलाई सम्झाएँ । उ अफिसमा काम गर्छे, लोग्ने र छोरीको पनि राम्रै ख्याल राखेकी छ। बुढाबुढीमा हुनुपर्ने सबै ब्य’वहार सामान्य छ । दुवै पट्टीका परिवारका प्रिय बुहारी ज्वाईं हुन् । पैसा छ, सुविधा छ सबै राम्रो छ तै पनि उसले पछिल्लो समय पटक-पटक यो कुरा दोहोर्याईरहेकी छ ।
उ शिक्षित महिला हो, श्रीमानलाई चौपट्टी माया गर्छे, तर पनि उ खुशी छैन भन्ने अर्थमा समाजले त उसलाई चरित्र गलत भएकी, से क्स धेरै चाहिने रहेछ त्यही भएर बुढासंग रि’स उठेको भन्न मात्र जानेको छ । लोग्नेलाई उसले यो कुरा राख्नै सक्दिन किनकी उसको श्रीमानले बुझेको से’क्स भनेको लोग्ने मा’न्छेको वि’र्य स्ख’लन मात्र हो त्यसमा स्वास्नीको क’र्तव्य लोग्नेको ईसारामा श’रिर मिलाउनु मात्र हो ।अर्को पटकको भेटमा उसको गु’नासो फरक देखियो ‘खै यार जिन्दगी बर्वात भयो मेरो त पहिले त सोच्थें से’क्स हाम्रो स”मस्या हो अहिले आएर लाग्छ यसले मलाई मन नै पराउँदैन मायाँ नै गर्दैन ।
उसले उदाहरणहरु पेस गर्दा मलाई पनि दिक्दार लाग्यो यो पटक । पछिल्लो पटक भन्न थालेकी छ ‘मलाई झुण्डेर मर्दिउँ जस्तै लाग्छ, छोरीको बिजोग हुन्छ भनेर मात्र हो । यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्यो भने उसले असले उल्टो कसको आड पाएर म संग निउँ खोजेकी छस् भनेर बखेडा गर्छ । अथवा कसले सिकायो तलाई भनेर शंका गर्छ ।
आज पनि पत्याउनै नसकिने गरी घट्यो सुनको मूल्य! हेर्नुहोस् कति पुग्यो
कोरोनाको जोखिम ह्वात्तै बढेपछि, देशैभरिका कर्मचारीहरुलाइ भर्खरै सरकारबाट आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !